ESI LELEE ỌSỌ NKE ỊNTANETỊ - NA KỌMPUTA WINDOWS, NGWAỌRỤ OS DỊ ỌCHA NA ỌRỤ ỊNTANETỊ - NETWORK NA INTANETI - 2019
Lelee ọsọ nke Intanet: nyochaa ụzọ
Echere m na ọ bụghị onye ọ bụla ma ọ bụghị mgbe niile na-enwe obi ụtọ na ọsọ nke Ịntanetị. Ee, mgbe faịlụ dọrọ ngwa ngwa, ibu vidiyo na-enweghị ntanetị na igbu oge, peeji nke na-emeghe ngwa ngwa - ọ dịghị ihe ga-echegbu onwe gị. Ma na nsogbu, ihe mbụ ha na-akwado ime bụ ịlele ọsọ nke Intanet. O kwere omume na ịnweta ọrụ ị naghị enwe njikọ ọsọ ọsọ.
Otu esi elele ọsọ nke Internet na kọmputa Windows
Ngwa ndị a jikọtara
Ọzọkwa, ọ dị mkpa iburu n'uche na n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-enye ha edepụtara oke ọnụ ọgụgụ mgbe ha jikọtara: 100 Mbit / s, 50 Mbit / s - n'eziokwu, ọsọ ọsọ ahụ ga-adị obere (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe nkwekọrịta ahụ kwupụtara ihe ruru 50 Mbit / s, ya mere ha adịghị emebi). Nke a bụ otu ị nwere ike isi lelee ya, anyị ga-ekwurịtakwa okwu.
Mee ya ngwa ngwa. M ga-egosi na ihe atụ nke Windows 7 (na Windows 8, 10 ọ na-eme n'otu ụzọ ahụ).
N'ebe ọrụ ahụ, pịa akara ngosi njikọ Ịntanetị (na-emekarị ka ọ dị ka nke a :) na bọtịnụ òké aka nri ma họrọ "Nhọrọ Network na Ịkekọrịta".
Wee pịa njikọ Ịntanetị n'etiti njikọ ọrụ (lee nseta ihuenyo n'okpuru ebe a).
N'ezie, windo ihe onwunwe ga-apụta n'ihu anyị, nke a na-egosi ọsọ ọsọ Internet (dịka ọmụmaatụ, enwere m ọsọ nke 72.2 Mbit / s, lee ákwà ngebichi n'okpuru).
Cheta! Ihe obula nke Windows gosiputara, onu ogugu enwere ike iche site na odidi nke oma! Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, 72.2 Mbit / s, na ezigbo ọsọ anaghị ebili n'elu 4 MB / s mgbe ị na-ebudata na nhazi dị iche iche.
Iji chọpụta kpọmkwem otú ọsọ nke njikọ Ịntanetị dị n'ezie, ọ ka mma iji saịtị pụrụ iche nwere ike igosi ule dị otú ahụ (banyere ha mgbe e mesịrị n'ime edemede).
Otu n'ime ule kachasị ewu ewu.
Tupu ịlele ma nyochaa, akwadoro ka ị gbanyụọ mmemme niile metụtara netwọk, dịka ọmụmaatụ: iyi, vidio vidio, egwuregwu, ụlọ nkata, wdg.
Banyere speedtest.net, nke a bụ ọrụ na-ewu ewu maka iji nyochaa ọsọ nke njikọ na Ịntanetị (dịka ọtụtụ ọkwa nke onwe ha). Iji ha dị mfe. Mbụ ị chọrọ pịa njikọ dị n'elu, wee pịa "bọtịnụ mmalite".
Mgbe ahụ, n'ime ihe dịka nkeji, ọrụ ọrụ a ga - enye gị data nyocha. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnọdụ m, ọnụahịa ahụ dị ihe dịka 40 Mbit / s (ọ bụghị ihe ọjọọ, dị nso na ọnụ ọgụgụ tarifụ n'ezie). Otú ọ dị, ọnụọgụgụ ping dịtụ mgbagwoju anya (2 ms - nke a bụ obere ping, dịka na netwọk mpaghara).
Cheta! Ping bụ akụkụ dị oké mkpa nke njikọ Ịntanetị. Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ping banyere egwuregwu ịntanetị, ị nwere ike ichefu, ebe ọ bụla ihe niile ga-ebelata ma ị gaghị enwe oge iji pịa bọtịnụ. Ping na-adabere n'ọtụtụ sigharị: nkesa nke ihe nkesa (PC nke kọmputa gị na-eziga ngwugwu), arụ ọrụ nke ịntanetị gị, wdg. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'okwu banyere ping, ana m akwado ka ị gụọ isiokwu a:
Ọrụ na-adọrọ adọrọ iji nwaa njikọ ahụ. Kedu ihe ọ na-adọrọ mmasị? Eleghị anya ihe ole na ole: mfe nke ịlele (pịa naanị otu bọtịnụ), ezigbo ọnụ ọgụgụ, usoro ahụ na-aga ozugbo na ị nwere ike ịhụ n'ụzọ doro anya otú ọsọ ọsọ na-egosi nbudata ma bulite ngwa ngwa nke faịlụ ahụ.
Nsonaazụ ya dị mma karịa ọrụ gara aga. N'ebe a, ọ dị mkpa iburu n'uche na nchọta nke ihe nkesa ahụ, nke jikọtara ya na ule ahụ. Maka na ọrụ gara aga, ihe nkesa ahụ bụ Russian, ma ọ bụghị na ya. Otú ọ dị, nke a bụkwa ezigbo ihe ọmụma.
Nye ọtụtụ ndị, karịsịa na mba anyị, ihe niile German na-ejikọta na eziokwu, àgwà, ntụkwasị obi. N'ezie, ọrụ ọsọ ọsọ ha na-akwado nke a. Iji nwalee ya, pịa bọtịnụ dị n'elu ma pịa otu bọtịnụ "Nyocha ngwa ngwa".
Site n'ụzọ, ọ dị mma na ị gaghị ahụ ihe ọ bụla dị oke ụba: ma ọ bụghị ngwa ngwa, ma ọ bụ ihe osise a ma ama, ma ọ bụ ọtụtụ mgbasa ozi, wdg. N'ozuzu, usoro "German".
Ezi ọrụ nke ọ dị mfe ma dị mfe ịhọrọ ihe nkesa iji nwaa, wee malite ịnwale. Na nke a, ọ na-eri ọtụtụ ndị ọrụ.
Mgbe ule ahụ gasịrị, a na-enye gị nkọwa zuru ezu: adreesị IP gị, onye ọrụ, ping, budata / bulite ọsọ, ụbọchị nyocha. Ọzọkwa, ị ga-ahụ ụfọdụ na-akpali mmasị flash nkiri (na-akpa ọchị ...).
Site n'ụzọ, ụzọ dị mma iji lelee ọsọ nke Intanet, n'echiche m, ndị a bụ iyi egwu dị iche iche. Were faịlụ site na n'elu tracker ọ bụla (nke ọtụtụ narị mmadụ na-ekesa) wee budata ya. N'eziokwu, usoro uTorrent (na ihe ndị yiri ya) na-egosi ọsọ ọsọ na MB / s (kama Mb / s, nke ndị ọrụ niile na-egosi mgbe ha jikọtara) - mana nke a abụghị egwu. Ọ bụrụ na ị banyeghị na tiori, mgbe ahụ, ngwa nbudata faịlụ ahụ zuru, dịka ọmụmaatụ, 3 MB / s * mụbara site ~ 8. N'ihi ya, anyị na - enweta ihe dịka 24 Mbit / s. Nke a bụ ezigbo ihe.
* - ọ dị mkpa ichere ruo mgbe usoro ihe omume ahụ rutere ọnụ ọgụgụ kachasị elu. Emekarị mgbe 1-2 nkeji mgbe nbudata faịlụ site n'elu ọkwa nke a na-ewu ewu.